Hubachiisa qajeelcha labsii yeroo ariifachiisaarra darbe – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Hubachiisa qajeelcha labsii yeroo ariifachiisaarra darbe
On Nov 30, 2021 563
Finfinnee, Sadaasa 21, 2014 (FBC) –Hidhattoota garee shororkeessaa ABUT naannoo Shawaa Kabaa, Walloo Kibbaa fi Kaabaa akkasumas godina Saba Oromootti argamaniif qajeelchi labsii yeroo ariifachiisaa hubachiisa laateera.
Raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa biroon haleellaa olaanaa taasisaniin diinaarra kisaaraa guddaan qaqqabaa jira. Diinnis kan danda’ee saamuun, kan ammoo barbadeessuun baduufis yaala jira. humni garee shororkeessaa iddoowwan seeneetti osoo hin adabamiin ba’uu hin qabu. ni booji’amaa ykn ammoo tarkaanfiin irratti ni fudhatamaa jedha qaajelchichi.
Kanaafis miseensoonni garee ABUT iddoowwan weeraraniitti, raayyaan ittisa biyyaatin barbada’aa jiraachuun miseensoonni garicha lubbuu keessaan olchuu harka kennaadhaa kan jedhu qajeelchichi kana kan hin fudhanne yoo ta’ee ammoo adabbii isin irra ga’uuf itti gaafatamuumman kan keessani jedheera.
Miseensoota garicha harka laataan hawaasni kunuunsaan qabee humnoota nageenyaaf akka dabarsuu, qaamoleen nageenyaas miseensoota kanneen sirna seeraan akka qaban ajaja dabarseera.
Kutaa Hawaasa iddoowwan weeraramaniitti argamaniif, gurmooftanii qabeenya hatamee hambisuun, konkolaattoonni akka hin dabarreef daandiiwwan dhaagaa fi jirmaan cufuun garee shororkeessaa ABUT to’annaa jala oolchuun,diinni tokkoolleen miliquu hin qabuu harka laachuu qaba ykn tarkaanfii irratti fudhatamuu qaba.
Akkasumas diinni meeshaa waraanaa qabatee miliquu hin qabus jedha qajeelchi laabsii yeroo muddamaarraa ba’e.